‘Aylan ho an’i Tajikistan’: Ankizy Mpifindra Monina Iray Maty Teo An-tsandrin’ny Manampahefana Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Novambra 2015 5:10 GMT
Tajiks ao New York mitaky ny rariny ho an'i Umar eo ivelan'ny Masoivoho Rosiana. Pikantsary avy amin'ny lahatsary YouTube nakarin'i Bolk Bolkev.
Nahatohina ny any Rosia sy Tajikistan ny fahafatesan'ny zaza dimy volana, ny kely indrindra tao amin'ny fianakaviana Tajik mpifindra monina ara-toekarena monina any St.Petersburg. Na tsy fantatra aza ny tena antony marina nahatonga ny fahafatesan'i Nazarov Umarali, dimy volana, maro tao amin'ny firenena roa tonta no mitàna ny fanjakana Rosiana ho tompon'andraikitra .
Tamin'ny 13 Oktobra 2015, toy ny fihazàna ny mpifindra-monina tsy ara-dalàna, notazonin'ny polisin'ny Sampan-draharaha Federaly amin'ny Fifindramonina Rosiana (FMS) any St. Petersburg ireo olom-pirenena roa avy any Tajikistan sy ny zanany lahy dimy volana. Nentina tany amin'ny paositry ny polisy izy mivady noho ny fiahiahiana ho nandika lalànan'ny fifindràmonina. Nosarahan'ny polisy tamin'ny ray aman-dreniny ilay zaza ary tsy nahita azy velona intsony izy ireo.
Isan-taona, olom-pirenena Tajik an'arivony diso fanantenana no mandao ny firenena izay miankina be indrindra amin'ny vola arotsak'izao tontolo izao mba hitady fiainana tsara kokoa, indrindra fa any Rosia. Amin'ny fomba henjana fanao amin'ny fifindramonina sy ny fanindrahindràna fitiavana tanindrazana izay tsy mitsaha-mitombo miandry azy ireo amin'ny toerana kendreny hitodiana, ny fanilikilihana mahazatra no sanda aloan'izy ireo hanànana fahafahana ara-toekarena tsara kokoa.
Mehriniso Nazarova — ny reniben'i Umarali — nilaza fa niezaka ny haka ilay zaza tany amin'ny polisy izy, indrindra mba hamàhana azy amin'ny ronono mitovy amin'ny an'ny reny. Tsy nahomby ny fikasàny, nilaza tamin'ny media Rosiana Dozhd i Nazarova fa naneso ny lantom-peony ny polisy.
Nampahafantarina ny ray aman-drenin'i Umarali ny nahafatesany, nanolo-kevitra ny polisy fa vokatry ny aretin'ny taovam-pisefoana izany, ny ampitso maraina.
Fisaonana faharoa ho an'ny fianakaviana Nazarov izao tany Saint Petersburg. Folo taona lasa izay, novonoina ny zanak'i Mehriniso ary dadatoan'i Umarali. Tsy hita mihitsy ilay mpamono.
Zazakely Umar. Nifampizaràna betsaka.
Tety anaty aterineto, nanao fampitahàna tamin'ny fahafatesan'ilay zazalahy Syriana telo taona Aylan, maty an-drano raha niezaka ho any Gresy ireo Tajik mpampiasa aterineto. Nongotana tamin'ny tanindrazany ny fianakavian'i Aylan noho ny ady mamohehatra, ny an'i Umarali noho ny tsy fisian'ny asa tsy azo ivalozana ao anaty toekarena mahakivy indrindra any Azia Afovoany.
Tao amin'ny bilaogy ny 27 Oktobra, nomarihan'i Tanya Lokshina, Talen'ny Fandinihana ny Zon'olombelona (HRW) any Rosia, ny antony nahatonga ny raharaha ho nisarika ny sain'ny maro :
Na dia mivoaka aza ny antsipiriany tsirairay… ny voasokitra mandrakizay ao an-tsain'ny vahoaka dia ny manampahefana Rosiana no nanasaraka tsy nisy antony ny zaza tamin'ny reniny, ka tsy nanome vaovao ho azy mihitsy nandritra ny efa ho andro iray manontolo, ary avy eo nilaza tamin'ny fianakaviany haka ny razana.
Any Tajikistan, niteraka fanafintohinana goavana teo amin'ny vahoaka ny tantara mampahonena nanjo an'i Umarali. Nisy tononkalo noforonina ho fahatsiarovana ilay zaza, nanokana ho azy ny pejiny voalohany ny gazety amin'ny fiteny Tajik ary nanova ny sary mombamomba azy ny Tajik mpampiasa Facebook ho firaisankina.
Nosoniavin'ny olona an-jatony maro ny fitakiana an-tserasera natao ho an'ny filoha Rosiana Vladimir Putin. Nanomana fitokonana teo akaikin'ny masoivoho Rosiana ny vondrom-piarahamonina Tajik any New York, mitaky fanadihadiana lalina mikasika ny raharaha.
Ny tadiavinay dia tsy misy afa-tsy ny rariny ho an'ilay zaza dimy volana manana anarana hoe Umar izay novonoina tany Rosia!!!
Ny mpamaky ny tranonkalam-baovao ao an-toerana, mandritra izany fotoana izany, dia nampitaha ny politikan'ny governemanta Rosiana manoloana ny Tajik mpifindra monina amin'ny “fasisma”.
Nampiaka-peo i Amin raha nanoratra tao amin'ny Asia-Plus ka nanao hoe:
I Rosia no firenen'ny fasisma amin'ny taonjato faha-21. Mampalahelo fa mampiray ny Tajiks amin'io firenena io ny tantara. Ny lesona azo tsoahana dia ny hoe ilaintsika ny hanorina firenena matanjaka izay toerana iriantsika rehetra hainana sy ho afaka amin'ireo firenena fasista …
Mety mijaly kokoa ny fianakavian'i Umarali eo am-piandrasana azy ireo.
Nolazain'ny Minisiteran'ny Atitany fa tsy nanao na inona na inona mihitsy mety ho nahatonga ny fahafatesan'ilay zaza ny polisy.
Ankoatr'izany, araka ny voalazan'i Boris Vishnevsky, mpikambana ao amin'ny filankevitry ny faritra ao St Petersburg, nieritreritra tsara ny manampahefana raha hanameloka ny fianakaviana amin'ny heloka bevava “fanabeazana ratsy ho an'ny zaza tsy ampy taona.”
Nametraka voninkazo teo amin'ny masoivoho Tajik i Vishnevsky, avy ao amin'ny Yabloko, antoko mpanohitra liberaly tony fihetsika, ary nangataka ny Rosiana mba handinika ny fanehoankevitra raha nisy zazakely Rosiana maty tamin'ny fomba toy izany tany Tajikistan:
Amin'ny fomba ofisialy, afaka milaza isika fa tsy noho ny zom-pirenena izany. Na izany aza, matoky tanteraka aho fa tsy hanao fomba toy izany amin'ny zaza iray hafa ry zareo, raha toa ka tsy mpifindra monina izy ireo, indrisy, matetika heverinn'ny polisin'ny tanàna sy ny manampahefana hafa toy ny olona tsy manana ny zo rehetra izy ireo, olona sokajy faharoa izay azonareo atao amin'izay itiavanareo azy, tsy misy olona mitsangana ho azy, tsy sahy hiaro azy sy ho tafintohina amin'izany. Mino aho fa ireo lafin-javatra rehetra ireo dia tsy azo lavina fa miditra eto — indrisy — andraikitra mahatsiravina.
Araka ny Sampan-draharaha Federaly Rosiana misahana ny Fifindra-monina, 984.323 ireo mpifindra monina avy any Tajikistan no voarakitra an-tsoratra tamin'ny 2015 ho miasa ao amin'ny firenena, ary misy isa fanampiny tsy fantatra izay miasa tsy ara-dalàna. Tamin'ny 20 Oktobra, olom-pirenena Tajik 1.500 mahery no voalaza fa voaroaka avy any Maosko sy ny faritra manodidina azy.
Raha naneho hevitra ny tomponandraikitry ny seraseran'i Putin tamin'ny 28 Oktobra ka nilaza fa “nahatsapa” raha tsy efa “mitantana” ny fanadihadiana mikasika ny fahafatesan'i Umarali ny filoha Rosiana, ny Filohan'ny Tajikistan Emomali Rakhmon kosa etsy andaniny tsy niteny mihitsy mikasika ilay olana, angamba ahiany ny hahatezitra an'i Rosia lehibeny na hampirehitra ny fankahalàna ny Rosiana vitsy an'isa ao amin'ny firenena.
Amin'ny tsy fisian'ny fanehoan-kevitra ofisialy matanjaka, nanokana ireto andalan-tsoratra ireto ho an'i Umarali i Zafari Sufi, ny poeta Tajik iray:
..Mamelà ahy, ry Omar, tsy afa-manoatra aho manoloana ny fahoriana,
Tsy afaka manao na inona na inona ho anao aho, raha ny tenako …
Umar! Ny fahafatesanao dia mari-pamantarana ny fahalemena sy ny tsy fahamarinan-toetra,
Meteza ho mpitondra hafatra madion'ny fireneko eo anatrehan'Andriamanitra.
Mamelà ahy ianao, ary itaraino any amin'ny Andriamanitrao izahay,
Ka lazao ny hakanosàna sy ny fahalemen'ny olontsika,
Umar, anjely ianao, nampahorina, shahid madio [Silamo izay maty tanora ao anatin'ity raharaha ity],
Resaho ny momba ny tsy rariny sy ny mpanao tsindry hazo lena…
Nanome tatitra ho an'ity tantara ity ihany koa i Mufiza Kenjaeva.